Wayyaanen Yaaka Barartoota Oromoo fi Uumataa Oromoo irrati rawwatuu irrati falmachuu qabna.
Waalitti b'iinsa guyyaa kaleesaa eegalee mooraa university finfinee 4 killoo keessati uumameen baratooii oromoo heeduun hidhamanii jiru. Guyyaa gaafa january 2 / 2013..maqaa fokkisaa ilmaan oromoo arabsuu bareesanii mooraa keessa tii maxxansuun kan eegalee dubbin ku har'as itti fufee hidhamuu barattoota oromoof sababa ta'ee jira.
Galgala kaleesaa ijoleen amaaraaf tigiree yaaka hojeetan mooraa keessa ba’uun ala bulan. Har'a garuu federaali mooraa seenuun Oromoo walitti isaan qabee gara mana hidhaa sebatenyaa kan naanoo jorgis/ mexiikoo jirutti isaan geesees jira.
Gidiraa Wagga waggan Ijoolee Oromoo irra ga’uu kana waldan Fannoo Dima adunya, Human right wach fi Amensty internationati akka nu gabaftan jeechun Baratoon Oromoo iyyatan jiru.
Oduuma Walfakatuun torbe darbe kasee Magala Gori fi Mandi giduu ykn Annaa Qilixuu Karraa gutuman gututi, Mootummaa Network irra kutuu isaa ibsamee jira. Network Bareefama Gummi paarlamaa Oromoo website irrati darben Iccitiin keenya ifaa bayee jeechundha OPDOn yakka kana raawwatan riftan cufuu isaan irra iyuu. Rakko Humameef yaakamtoota qoorachuu dhisan oduun kun kara kami bayee jeedhan uumataa gooluu egaluun isaani yaakaa irrati yaaka dalaga akka jira ragga ofti ba’aa jiruu. Mootummaani Oromiyaa Bulchinsoota Ummata samuun fi jeeqaa jiran kana mana murttiti dhiyeesuun isaa akka hin olee dubatama jira, Samitchi Uumataa Oromoo irra goodhama jiruu kufatii Mootumma kanaaf sababa ta'uuf deema jeechun sooda isaan ibsaa jiru. Ummataa tokko qoofati basaan uugrura akkasi irra ka’uun goocha Waggarii Jigi yoo ta’ee malee murtii Mootummaa Naannoo Oromiyya akka hin tanee Ogananan naannoo Oromiyya tokko ibsan jiru.